August 2015 | ကမ်းလက်
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/31/2015 - No comments
စိုက်ခင်းတွေ ပိုးကျလို့ဆေးဖြန်းရင် ပိုးတွေက ဆေးမဖြန်းတဲ့ အခင်းဘက် ရွှေ့ပြေးကြတယ်။ တစ္ဆေသရဲတွေကရော အဲလိုလားမသိဘူး။ မနေ့ညက ၁၁ နာရီထိုးကာနီးမှ ဖုန်းဆက်လာတယ်၊ ခရစ်ယန်ဘာသာဝင်တွေ နေတဲ့အခန်းတွေက သူတို့ဘာသာရေးနဲ့အညီ ရွတ်ဖတ်ဆုတောင်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေနေတဲ့ဖက်က ဘာမှမလုပ်ရသေးတော့ အကောင်ဘလောင်တွေက မြန်မာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖက်မှာ လာပြီး သောင်းကြမ်းနေလို့ တဲ့။ ၁၁ ထိုးခါနီးမို့ မသွားနိုင်တော့ တစ္ဆေဆိုတာ သူတို့ခြောက်လို့ မကြောက်ရင် စိတ်ညစ်ပြီး ပြန်သွားတာ၊ ကြောက်မနေနဲ့ လို့ပဲ အဖြေပေးလိုက်ရတယ်။ တကယ်လည်း တစ္ဆေက အဲသလိုပါပဲ။ သူတို့လည်း မကြောက်တဲ့လူဆို စိတ်ကုန်သွားတာ။
တရုတ်ပြည်ရဲ့ မိုးအောက်မြေပြင် ဝါဒ
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 8/31/2015 - No comments
“လူရိုင်းတွေရဲ့” စစ်အင်အားအောက်မှာ နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင် အရှုံးပေး ရပြီးနောက် ပြည်တွင်းအုံကြွမှု အကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားတဲ့အခါမှာ (တိုင်ပင်၊ ပုန်ကုန်မှု-Taiping Relellion) တော့ နိုင်ငံခြားစစ်အကူအညီကို တောင်း ခံခဲ့ရပါ တော့တယ်။ တရုတ်ဘုရင်က အမေရိကန်သမ္မတ အေဗရာဟင် လင်ကွန်းထံ ရေးပို့တဲ့ စာထဲမှာ
“နတ်မင်း ကြီးများ၏ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အုပ်ချုပ်စီမံရန် ပေးအပ်ထားသော အမိန့်ကို လိုက်နာဆောင် ရွက်နေရသည့် ကျွန်ုပ်တုိ့ မဇ္ဈိမ နိုင်ငံတော် (တရုတ်ပြည်)နှင့် မဇ္ဈိမနိုင်ငံတော်အပြင်မှာ ရှိနေသည့် အခြား နိုင်ငံတော် များအားလုံးသည် ညီအကိုရင်းသဖွယ် ကမ္ဘာ့မိသားစုဝင် တွေသာဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်ပါသည်” လို့ အပေါ်စီး လေသံနဲ့ ရေးထားပါတယ်။
ထင်ရှားတဲ့ စကော့(တ်) လူမျိုး၊ တရုတ် အထူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင် ဂျိမ်း(စ်) လက်ဂီ (James Legge) ၁၈၇၂-ခုနှစ်က ရေးထားတဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာတော့
“ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာတော့ ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေအပေါ် တရုတ် ရဲ့သဘောထားက သိသိသာသာကြီး ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး အခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ အဆင့်တူ၊ သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်တွေ ထိုးလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရုတ် ဝန်ကြီးတွေနဲ့ လူထုကတော့ တရုတ်ပြည် ဟာလည်း ကမ္ဘာ့ မိသားစုနိုင် ငံတွေထဲက တစ်နိုင်ငံသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို သဘောမပေါက် ကြသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရှေးရှေးအင်ပါယာတွေ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ “မိုးအောက် မြေပြင်” ဆိုတာ တစ်မိုးလုံးအောက်က မြေပြင်မဟုတ်၊ ကောင်း ကင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောက်က မြေပြင်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက် ကြဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။”
Labels: ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော်
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 8/31/2015 - No comments
ပြောလို့မှ မပြီးသေးဘူး၊ ညောင်ပင်အောက်က ဘုရားရှေ့မှာ စေတီ၊ ဆင်းတု၊ ဆရာတော်ရုပ်ထုတွေ လာတင်ထားကြပြီ။
ကျောက်ဆင်းတုဆိုရင် နှစ်ပေါင်းထောင်ချီကြာတောင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ့် သားသမီးတွေက ကိုယ့်လို ဟုတ်ပါ့မလား။ သူတို့က ဟုတ်တယ်ဆိုဦး သူတို့ သား သမီးတေကျ ဘယ်လိုလဲ။
ရွှေ့ပြောင်း မြန်မာလုပ်သားတွေ မပြောနဲ့ စလုံးတွေကိုတောင် ဘုရား ဆင်းတုတော်တွေ လက်ဆောင် မပေးကြပါနဲ့၊ နှလုံးသားထဲ ဘုရားတည်ကြပါ။ ဆင်းတုတော်တွေ စွန့်ပစ်ခံရတာ စိတ်မကောင်းစွာ ခဏခဏတွေ့နေရလို့ပါ လို့။
- on 8/31/2015 - No comments
ထိုင်းကိုဗုံးဖောက်ခွဲခဲ့တဲ့ တူရကီနိုင်ငံသားက တရားမဝင် ဝီဂါလူမျိုးတွေကို တရုတ်ပြည်ထဲ ပြန်ပို့တဲ့အတွက် ထိုင်းကို လက်စားခြေဟန်ရှိတယ်ဆိုပဲ။ သူကတော့ ဘာမှမပြောဘူး။
မြန်စာအစိုးရက ပါတီတွေ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်ခွင့် ၁၅ မိနစ်စီ ပေးမယ်၊ ဒါပေမဲ့ တပ်မတော်ကို အပုတ်ချ၊ စွပ်စွဲတာတွေ မပါရ၊ အစိတ်သားကိစ္စကို လုံးဝ မထိရ တဲ့။ "တပ်မတေ် ဖြိုခွဲ၊ တပ်မတေ် ပြိုကွဲ" ဆိုတဲ့စကားကို ခဏခဏ ကြားရတော့ တော်တော်များ ဖရက်ဂျိုင်းလ်ဖြစ်နေလား တွေးမိတယ်။ လေ ယဉ်တွေပေါ်တင်မယ့် ပစ္စည်းတွေမှာ
ကပ်ထားတတ်တဲ့ စာကြောင်းလို "Handle with care" ပေါ့။
ပုံက ကြိုက်လို့ပါ၊ အထက်ကသတင်းတွေနဲ့ ဆိုင်လှမယ် မဟုတ်ပါ။ မဆိုင်လည်း ကိုယ်တင်ချင် တင်လို့ရတာပဲ မဟုတ်လား။
တော်ကြပါတော့၊ အရိုက်ခံနေရတာက နှင်းရီပါ
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 8/30/2015 - No comments
ရွာက နှင်းရီဆိုတဲ့ကောင်မလေး အခြားရွာက ပြန်လာတော့ သရဲပါလာပြီး အိမ်ရောက်တာနဲ့ ငိုလားရီလား ဖြစ်ပါလေရော။
ဒါနဲ့ ရွာရှိ ပယောဂဆရာကို သွားပင့်ကြသပေါ့။ ဒါပေမဲ့ နှင်းရီနဲ့အတူပါလာတဲ့ သရဲက ပယောဂဆရာထက် ဝါရင့်နေတော့ ပယောဂဆရာကို လုံးဝမကြောက်ဘူး။ ထော်လော်ကန့်လန့်တွေ ပြန်ပြောတယ်။
ဒီတော့ ပယောဂဆရာက နောက်ဆုံး ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ ရိုက်မယ်ခြိမ်းခြောက်ရော။ သရဲက မကြောက်ရေးချ မကြောက်ပဲ။
ဆိုပါတော့ ပယောဂဆရာက ရိုက်ရော။
လေးငါးချက်လောက် ရိုက်ပြီးတော့ နှင်းရီက မျက်ရည်တွေနဲ့ တောင်းပန်ရှာတယ်။
"တော်ကြပါတော့၊ အရိုက်ခံနေရတာက နှင်းရီပါ။ ကြိမ်ရွယ်လိုက်တာနဲ့ သရဲက အပြင်ရောက်သွားပြီ။ ကျမ ကြားဖူးတာက သရဲပူးလို့ရိုက်ရင် လူမှာ ဒဏ်ရာမကျန်ဘူး၊ သရဲပဲ ဒဏ်ရာရတယ်တဲ့။ ကျမ ကြောနဲ့တင်ပါးပေါ်က ဒဏ်ရာတွေ ကြည့်ကြပါဦး" ဆိုပြီး ပြလို့ ဘေးကလူတွေမှာ ရယ်ရမလို ငိုရမလိုပဲ။
ဆရာက မနိုင်တဲ့အခါ သရဲကိုရိုက်ပေမဲ့ ကိုယ့်ရွာသူပဲ ထိနေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ သင်္ခန်းစာလေး ရလိုက်တယ်။
မှတ်ချက်။ လောလောဆယ် အတည်ပြုတဲ့ဥပဒေနဲ့ မဆိုင်ပါ။ ခ်ခ်။
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/30/2015 - No comments
တိရောကုဍ္ဍသုတ်တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြသူတွေနဲ့ အခြား စိတ်ဝင်စားသူတွေအတွက် ပါဠိနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တိရောကုဋ္ဋေသု တိဋ္ဌန္တိ၊ သန္ဓိသိင်္ဃာဋကေသု စ။
ဒွါရဗာဟာသု တိဋ္ဌန္တိ၊ အာဂန္တွာန သကံ ဃရံ။
Outside the walls, they stand
and at crossroads,
At door-posts, they stand
returning to their former homes.
ပဟူတေ အန္နပါနမှိ၊ ခဇ္ဇဘောဇ္ဇေ ဥပဋ္ဌိတေ။
န တေသံ ကောစိ သရတိ၊ သတ္တာနံ ကမ္မပစ္စယာ။
But whenameal with plentiful food
and drink is served.
No one remembers them
ဧဝံ ဒဒန္တိ ဉာတီနံ၊ ယေ ဟောန္တိ အနုကမ္ပကာ။
သုစိံ ပဏီတံ ကာလေန၊ ကပ္ပိယံ ပါနဘောဇနံ။
'ဣဒံ ဝေါ ဉာတီနံ ဟောတု၊ သုခိတာ ဟောန္တု ဉာတယော'။
for their relatives,
give timely donations of proper food and drinks
(thinking "May this be for our relatives,
May our relatives be happy.
တေ စ တတ္ထ သမာဂန္တွာ၊ ဉာတိပေတာ သမာဂတာ။
ပဟူတေ အန္နပါနမှိ၊ သက္ကစ္စံ အနုမောဒရေ။
the assembled shades of relatives.
With appreciation give their blessings
for the plentiful food and drink.
စိရံ ဇီဝန္တု နော ဉာတီ၊ ယေသံ ဟေတု လဘာမသေ။
အမှာကဉ္စ ကတာ ပူဇာ၊ ဒါယကာ စ အနိပ္ဖလာ'။
because of whom we have gained (this gift)
and the donors are not without rewards."
န ဟိ တတ္ထ ကသိ အတ္ထိ၊ ဂေါရက္ခေတ္ထ န ဝိဇ္ဇတိ။
ဝဏိဇ္ဇာ တာဒိသီ နတ္ထိ၊ ဟိရညေန ကယာကယံ ကယောကယံ။
ဣတော ဒိန္နေန ယာပေန္တိ၊ ပေတာ ကာလဂတာ တဟိံ’။
For (in their realm), there's no farming,
no herding of cattle, no commerce,
what's given here,
ဥန္နမေ ဥဒကံ ဝုဋ္ဌံ၊ ယထာ နိန္နံ ပဝတ္တတိ။
ဧဝမေဝ ဣတော ဒိန္နံ၊ ပေတာနံ ဥပကပ္ပတိ'။
As rain-water falling onahill,
even so does what's given here
ယထာ ဝါရိဝဟာ ပူရာ၊ ပရိပူရေန္တိ သာဂရံ။
As rivers, full of water,
အဒါသိ မေ အကာသိ မေ၊ ဉာတိ မိတ္တာ သခါ စ မေ။
ပေတာနံ ဒက္ခိဏံ ဒဇ္ဇာ၊ ပုဗ္ဗေ ကတမနုဿရံ'။
they were my relatives, companions, friends,"
Offering should be given for the dead,
န ဟိ ရုဏ္ဏံ ဝါ သောကော ဝါ၊ ယာ စညာ ပရိဒေဝနာ။
န တံ ပေတာနမတ္ထာယ၊ ဧဝံ တိဋ္ဌန္တိ ဉာတယော'။
For no weeping, no sorrowing,
အယဉ္စ ခေါ ဒက္ခိဏာ ဒိန္နာ၊ သံဃမှိ သုပ္ပတိဋ္ဌိတာ။
ဒီဃရတ္တံ ဟိတာယဿ၊ ဌာနသော ဥပကပ္ပတိ'။
well-placed in the samgha,
it works for their long-tern benefit
သော ဉာတိဓမ္မော စ အယံ နိဒဿိတော၊ ပေတာန ပူဇာ စ ကတာ ဥဠာရာ။
ဗလဉ္စ ဘိက္ခူနမနုပ္ပဒိန္နံ၊ တုမှေဟိ ပုညံ ပသုတံ အနပ္ပက''န္တိ။
In this way, the proper duty to relatives has been shown,
and monks have been given strength.
The merit you have acquired isn't small.
ရယ်စရာ ဥပဒေ (လက်ထပ်စာချုပ်မရှိရင် ရှစ်ပါးသီလစောင့်)
မရေးအပ်တဲ့ဥပဒေပေမဲ့ ဘာသာရေးနဲ့ကပ်ပြီး ဒီလို ကြည့်မိပါတယ်။ ဒီဥပဒေဟာ ရယ်စရာ ကောင်းလောက်အောင် နေရာမှားနေသလို ဘယ်တော့မှလည်း ထိထိရောက်ရောက် ကျင့်သုံးလို့ ရလိမ့်မယ် မဟုတ်ပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ အခြေခံဥပဒေက ငါးပါးသီလလို့ဆိုရင် ရပါတယ်။ အဲဒီ ငါးပါးထဲမှာ မေထုန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စက ကာမေသု "မိစ္ဆာစာရ" ပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းအတွက် ရည်စူးလို့ "မိစ္ဆာစာရ" ကိုသာ တားမြစ်ပြီး မိစ္ဆာ စာရ မဟုတ်တဲ့ အခြားကာမဂုဏ်တွေကို လွှတ်ပေးထားရပါတယ်။ အဲသလို မဟုတ်ရင် ဘယ်သူမှ လိုက်နာလို့မရတဲ့ ဥပဒေဖြစ်ပြီး ဟန်ဆောင်ဥပဒေ၊ လူသားများ ရယ်ဖွယ်ဥပဒေ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ မိစ္ဆာစာရကိုပဲ အရွယ် မရောက်သေးသူ၊ အလိုမတူဘဲ မတရားကျင့်သူ စသည် ခေတ်နဲ့အညီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုပြီး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
မေထုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာက ဒါပဲပြောသလားဆိုရင်တော့ မဟုတ် ပါဘူး။ အများအားဖြင့် လပြည့်လကွယ်လို ဥပုသ်နေ့တွေမျိုးမှာ ထူးထူးခြားခြား စောင့်ထိန်းကြတဲ့ ရှစ်ပါးသီလရှိပါတယ်။ ခေတ်စကားနဲ့ အထူးဥပဒေလို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီမှာ မေထုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ "အဗြဟ္မစရိယ" လို့ သုံးပြီး ဘယ်လို မေထုန်ဆက်ဆံခြင်းမျိုးကိုမဆို တားမြစ် ပါတယ်။ အထူးဥပဒေဖြစ်လို့ လူတိုင်း၊ နေ့တိုင်း စောင့်ထိန်းနေကြမယ် မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကျင့်လိုက ကျင့်၊ မကျင့်လိုက နေ။
ဒါကို မဖြစ်မနေ လိုက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုရင် အများစုကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ကနေ နှုတ်ထွက်သွားမှာပါပဲ။
လက်မထပ်ခင် အတူနေသင့် မနေသင့်က အရှေ့တင်မက အနောက်မှာလည်း ပြောဆိုနေကြဆဲပါ၊ ဒါပေမဲ့ ဒါက တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ ရွေးခြယ်မှုအနေနဲ့ပဲ ရှိနေပါတယ်။
အခု ဥပဒေအရ လူပျို၊ အပျိုတိုင်း မေထုန ရှစ်ပါးသီလ စောင့်ထိန်းရမယ်လို့ ဆိုလိုရာ ရောက်နေတော့ လက်တွေ့မကျတဲ့အပြင် ဥပဒေကို ဘယ်လို ကျင့်သုံးမလဲ(How to apply) ဆိုတာအတွက်လည်း အဖြေ မရှိပါ။
in စာတိုပေစ, ဇင်ဝေသော် - on 8/30/2015 - No comments
မြန်မာစာမှာ "နံ" ဆိုတဲ့ဝေါဟာရက နေရာတော်တော်များများမှာ မကောင်းတဲ့အဓိပ္ပါယ် ထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေ နဲ့တွဲတဲ့ နံ ကတော့ တစ်မျိုးပဲ။ ရိုးရိုးရေက ဈေးမကြီးဘူး၊ ရေနံက ကြီးလိုက်တဲ့ဈေး။
"မှောက်" ဆိုတဲ့စကားလည်း အဲသလိုပဲ။ မျက်စိမှောက်တာကျတော့ မမြင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်ပြီး မျက်မှောက်ပြုတာကျတော့ မြင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်။ မြင်တာမှ ရိုးရိုးမြင်တာတောင် မဟုတ်ဘူး၊ မဂ်ဉာဏ်၊ ဖိုလ်ဉာဏ်နဲ့ မြင်တာမျိုး။ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြု တဲ့။
in ဇင်ဝေသော်, ဘောလုံး - on 8/30/2015 - No comments
ဒီနေ့တော့ လီဗာပူးကလွဲရင် အသင်းကြီးတွေအားလုံး နိုင်သွားကြတယ်။ အာဆင်နယ်က နယူးကာဆယ်ကို မီးကြိုးမောင်းပျက်နိုင်၊ မန်စီးတီးက ဝက်ဖို့ဒ်ကို ဟန်နဲ့ပန်နဲ့နိုင်။
အထူးသဖြင့် ချယ်ချယ်တို့ အဖေအားပေးတဲ့ အသင်းလေး ချယ်လ်ဆီးကတော့ အောက်သင်းပီပီ သူ့ အိမ်ကွင်းမှာကိုပဲ အသင်းကြီးဖြစ်တဲ့ ခရစ္စတယ် ပဲလေ့စ်ကို နှစ်တစ်နဲ့ အရှုံးပေးသွားရလေရဲ့။
တရုတ်က လေတော့ နည်းနည်းမှ မလျှော့ဘူး
in ကစ်ဆင်းဂျား, ဇင်ဝေသော် - on 8/29/2015 - No comments
နပိုလီယံကို တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက် ဗြိတိသျှတို့ရဲ့ ကုန်သွယ် ရေး နယ်ချဲ့မှုကလည်း အရှိန် အဟုန်ပိုကောင်းလာပြီး နောက်ထပ်ကြိုးစားမှု အနေနဲ့ ဗြိတိသျှတို့က ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို စေ လွှတ်ခဲ့ပြန်ပါ တယ်။ နပိုလီယံနဲ့ဖြစ်တဲ့ စစ်ပွဲမှာ လက်စွမ်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိ သျှ ရေတပ်စွမ်းရည်ဟာ တရုတ်နဲ့ သံတမန်ဆက်ဆံရေး ကမ်းလှမ်းမှု မှာတော့ သိပ်ပြီး အထောက်အကူ မဖြစ်လှပါဘူး။
ဗြိတိသျှ ကိုယ်စားလှယ်တော် ဝီလီယံ အမ်းဟာ့(တ်) (William Amberst) က သူ့ဝတ်စုံချုပ်လို့ မပြီးသေးလို့ ပါ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဘုရင်ရှေ့ ဒူးထောက် အခစားဝင်ဖို့ ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့အခါ သူနဲ့ သူ့ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက် ကိုလည်း တရုတ်အင်ပါယာက ပယ်ချခဲ့ပြန်ပါတယ်။ တရုတ်ဘုရင် မင်းမြတ်က အင်္ဂလန်ရဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသား ရီဂန့် (Regent) ထံ ရေးတဲ့စာမှာ
“မိုးအောက်မြေပြင်တစ်ခုလုံး၏ အရှင်သခင်၊ တရုတ်အင်ပါယာသည် ကိုယ်စားလှယ်အသီးသီးထံ ကိုယ်တိုင်သွားရောက် တွေ့ဆုံမှု ပြုမနေနိုင်ပါ” “အလွန်ဝေးလံလှသည့် ပင်လယ် တစ်ဖက်ကမ်းရှိ နိုင်ငံတစ်နိုင်၏ သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့် ယဉ် ကျေးမှု အဆင့်အတန်း မြင့်မားလိုမှုအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတော့ တရုတ် ဘုရင်မင်းမြတ်က အသိအမှတ်ပြု မှတ်တမ်းတင်ထားပေသည်။ သို့သော် ...”
(၁၉ ရာစု၊ အနောက်တိုင်း သာသနာပြုတွေရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာတော့ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။)
“ယနေ့မှစ၍ ဘယ်လိုသံတမန်မှ မစေလွှတ်ပါနှင့်၊ ဤကိစ္စက ခရီးပန်း၊ အချိန်ကုန်သာဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့အနေဖြင့် စိတ်လိုလက်ရ အလုပ် အကြွေး ပြုလုပ်လိုသည်ဆိုပါက အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျှင် တရုတ် အင်ပါယာမှ သာသနာပြုများ စေလွှတ် ပေးနိုင်ပေသည်။ သို့မှသာ သင်တို့လည်း ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်မြင့်မားလာသူတွေ ဖြစ်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ ယခုထုတ်ပြန်လိုက်သော အမိန့်ကို သင်တို့အနေနှင့် ထာဝရ လိုက်နာကြရမည်။”
သက္ကရာဇ် ၂၀၄၀ မှာ ရေပြတ်လပ်မှု အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိ
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/29/2015 - No comments
လာမယ့် သက္ကရာဇ် ၂၀၄၀ မှာ ရေပြတ်လပ်မှု အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်ရဖွယ် ရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေကို ခန်းမှန်းဖော်ပြထားပါတယ်။ စင်္ကာပူလည်း ပါဝင်နေ တယ်။ မြန်မာ မပါလို့ တော်ပါသေးရဲ့။ တရုတ်ကြီးက ရေမဝယ်သေးသရွေ့ ဒီပြသနာ မကြီးလှသေးဘူးလို့ ဆိုရမှာပါ။ နိုင်ငံတွေစာရင်းကို ပုံ ၂ မှာ ရှုပါ။
၃ နဲ့ ၄ က ထိုင်း ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဒုက္ခသည်ပြသနာပါ။ ပါကစ္စတန်အပြင် ဆီးရီးယားနဲ့ ဆိုမာလီယားတို့ကတောင် ပါနေသေးတယ်။ ဟန်တင်တန်ဟောကိန်းတွေကတော့ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် မှန်နေတယ်။
မြန်မာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းကတော့ ဟံသာဝတီလေဆိပ် စီမံကိန်း ရွှေ့ ဆိုင်းတဲ့ အကြောင်းပဲ ပါလာတယ်။
ဒါနဲ့ မနေ့က ခြယ်ခြယ်တို့အဖေပြောသွားတဲ့ "ရန်ကုန်ကားလမ်းပိတ်တာက လမ်းဘေးဈေးသည်လေးတွေ ဖမ်းနေရုံနဲ့တော့ မရလောက်ပါဘူး ကွယ်တို့" ဆိုတာလေး မဆိုးဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/28/2015 - No comments
တကယ်လို့ ပဉ္စင်္ဂကနေ ပဉ္စင်း၊ (ဦး)ပဉ္စင်းကနေ ဦးပဇင်း၊ ဦးပဇင်းကနေ ဦးဇင်းဆိုတဲ့အထိ ပြောင်းလဲလာခဲ့ရိုးမှန်ရင် ဒီနေ့ လူငယ်တွေပြောနေတဲ့ တျောက်တို့၊ မြုံဘူးတို့၊ ခေးတို့ ကလည်း ဘာသာဗေဒအားဖြင့် လက်ခံရမှာပါပဲ။ ပညာရှင်တွေကတော့ တာဝန်အရ စကားလုံးအဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲလာပုံကို လေ့လာရမှာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာစာခက်ဆစ်ဆိုတာ ရှိနေရတာ မဟုတ်လား။
တရုတ်အစဉ်အလာ ၇ လမြောက်
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 8/28/2015 - No comments
တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြတော့ တရုတ်အစဉ်အလာ ၇ လမြောက် ယုံကြည်မှုက မပျောက်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ထေရဝါဒတွေဆိုတော့ ထေရဝါဒလမ်းစဉ်အတိုင်း လိုက်ကြတယ်။
စက္ကူတွေမီးရှို့တာမျိုး မလုပ်တော့ဘဲ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်၊ တိရောကုဍ္ဍသုတ်ကိုရွတ်ဖတ်ပြီး စုပေါင်းအမျှဝေကြတယ်။
ဒါကို General transferring of merits လို့ ဒီမှာ ခေါ်ကြတယ်။
ထူးခြားတာက ကျောင်းကို ပုံမှန်လာတဲ့ ဒကာ၊ ဒကာမတိုင်း တိရောကုဍ္ဍသုတ်ကို သိကြသလို ကောင်းကောင်းလည်း ရွတ်နိုင်ကြတယ်။
မြန်မာတွေက ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ရေစက်ချနေကြတော့ တိရောကုဍ္ဍသုတ်ကို သိပ် မရင်းနှီးတော့ဘူး၊ ရေစက်ချ၊ အမျှဝေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ထေရဝါဒ အဆုံးအမတွေထဲမှာ တိရောကုဍ္ဍသုတ်ဟာ မူရင်းအကျဆုံးပါပဲ။
ငှက်မှာ အတောင် ဆင်မှာ အရောင်
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 8/28/2015 - No comments
စကားပုံ အသစ်ပဲ ပြောင်းရမလို။ "ငှက်မှာ အတောင် ဆင်မှာ အရောင်" လို့။
မွဲခြောက်ခြောက် ဆင်တစ်ကောင် ဝင်လာရင် ဘုန်းတော်ကြောင့်ဆိုပြီး အစိုးရဖက်သားတွေက ရေးကြပြောကြပေါ့။
အခု ဆင်မည်းခြောက်ကောင် (တစ်ကောင်ထဲတောင် မဟုတ်ဘူး) ဝင်လာတော့ ဘုန်းကံကြောင့် ဘာကြောင့် ညာကြောင့် အသံမကြားရဘူး။ အစိုးရက ဘာမှမပြောတော့ လူထုက ပြောကြတယ်။
မောင်ခင်ညွန့်လက်ထက်ကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ၊ ထိုင်းက လွတ်လာတဲ့ သစ်ဆွဲဆင်ကို ဆင်ဖြူတော်ဆက်သခြင်းပဲ ခံရသလိုလိုနဲ့ ကောက်ဖမ်းထား လို့ ထိုင်းက တရားပဲ စွဲတော့မယ့်အထိ။ (သစ်ဆွဲသမားက သူ့ဆင်ကို ဘာလို့ ဆက်သနေမလဲ၊ ဆင်မရှိရင် သူ ထမင်းငတ်သွားမှာပေါ့)
ဘီဘီစီနဲ့တွေ့မှ အဲဒီကိစ္စက နားအေးသွားတာ။ ဆင်ဖြူတော် မဟုတ်ပါဘူး၊ ရောဂါကြောင့် ခရုသင်းစွဲနေတဲ့ဆင်ပါတဲ့။
လူက ဘာသာရေးနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူ၊ ဘုန်းကြီးက နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘက်ဆဲလားဖြစ်။ ကမောက်ကမ မနိုင်ဘူးလား။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/27/2015 - No comments
ကျောင်းဂေါပက ဥက္ကဋ္ဌက ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ နိုင်ငံရေးသဘောထား သုတေသန စာအုပ်နဲ့ သီဟိုဠ်၊ ကလနီယတက္ကသိုလ်က ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူထားတာ။ တစ်အုပ်လောက် ပေးပါအုံးဆိုတော့ သူ့စာအုပ်မှာ တည်းဖြတ်စရာတွေ ရှိနေသေးလို့ နောက်မှ ပေးမယ်တဲ့။ ဟန်တင်တန်တို့ ကစ်ဆင်းဂျားတို့ကို ကြည့်ပြီး သူတို့ဟာတွေလည်း ဖတ်နေ၊ ဘာသာပြန်နေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျမ်းရင်းကိုလည်း သိနေမှတော့ သူ့စာအုပ်က သိပ်ထူးမှာ မဟုတ်တော့ဘူး တဲ့။ ပေးတော့ ပေးမယ်ပြောတာပဲ။
စာထဲမှာ နာမည်ကြီးနေလို့ပါ။ ဝိသာခါတို့ မဟလ္လကတန်ဆာက အိန္ဒိယ ရာသီဥတုနဲ့ မကိုက်လောက်ပါဘူး၊ ပူအိုက်နေမှာ ထင်ပါတယ်။
သုဇာတာတို့ လှူတဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်းလည်း နာမည်ကြီးပဲ၊ တော်တော်ကောင်းမယ်ထင်နေတာ။ ကဆုန်လပြည့်နေ့တွေမှာ ကပ်လို့ စားရတယ်။ ပျော့စိစိနဲ့ အရသာကို မတွေ့ဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/27/2015 - No comments
၁။ နယူးယောက် အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သားကိစ္စက အာရှမျက်စိနဲ့ ကြည့် ရင် ရှေ့နည်းနည်း ပိုရောက်သွားသလိုပဲ။ စလုံးမလေးလို ကတုံး ရိတ်ပြီး ခပ်တည်တည် လူထဲထွက်ပြတာက ပိုမိုက်သလား လို့။ (သူမကတော့ ရောဂါကြောင့်ပါ တဲ့)
*လွတ်လွတ်လပ်လပ်၊ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆို ရွေးကောက် ပွဲမှာ နိုင်ဖို့ ယုံကြည်။
*ဒါပေမဲ့ ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေးအတွက် အသုံးချမှုမျိုးလို စိုးရိမ်စရာတွေတော့ ရှိ။
*လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကို ကြည့်ရင် ဒီမိုကရေစီ ကူးပြောင်းရေးခရီး ရှေ့သိပ်မရောက်သေး။
*မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ လူထုသုံးစွဲလာမှုက နိုင်ငံရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ၊ တရားမမျှတမှု၊ အဖိနှိပ် ခံရမှုတွေ လူထုက ပိုသိ။
သမ္မတ လျာထားသူဟာ ပါတီတွင်းကပဲ ဖြစ်မယ်၊ သူ(မ) ကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှပဲ ကြေငြာမယ်။
*သူမဟာ အခု ဖရီးဒမ်း ဖိုက်တာ မဟုတ်တော့၊ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရဖို့ အာရုံစိုက်ထားတဲ့ လက်တွေ့ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်လာ။
၃။ ဒါနဲ့ စကားမစပ် ဝိန်း ရွန်နီ ဂိုးစသွင်းနေပါပြီ။ ဟက်ထရစ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/26/2015 - No comments
တိုးရစ်။ ။ Hey, look at that! ကို မြန်မာလို ဘယ်လို ပြောရပါသလဲ။
မြန်မာ။ ။ ဟယ်၊ ကျန်း။
တိုးရစ်။ ။ ကျေးဇူးပါ။ Life is like that ကိုရော မြန်မာလို ဘယ်လို ပြောရပါသလဲ။
မြန်မာ။ ။ အာ့ ဘွပဲ။
တိုးရစ်။ ။ မှတ်ရတာ လွယ်တယ်နော်၊ ကျေးကျေး။
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, ဟာသ :) - on 8/26/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared ရီစရာလေးတွေစုထားတယ်'s photo.
Labels: ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, ဟာသ :)
အမေကိုပဲ မိခင်ဘာသာစကားနဲ့ တ ကြတယ်
in သီဟနာဒ, အမှတ်တရ - on 8/26/2015 - No comments
အသက်တော် ၈၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ပါဠိကောလိပ်၊ ပရင်စီပယ်ဆရာတော်ကြ်ီး ဆေးရုံးမှာ တင်ထားရတာ ရက်အတော်ကြာနေပြီမို့ ဒီနေ့ သွားဖူးဖြစ်ပါတယ်။ ဆွမ်းစားဖို့ ကုဋင်ပေါ်ကနေ ထိုင်ခုံပေါ် လူအကူနဲ့ အရွှေ့မှာ ဆရာတော်ကြီးနှုတ်က အမ္မလိုလို အမ်မာလိုလို အသံထွက်လာလို့ ဘာမိန့်လိုက်တာပါလိမ့်လို့ ဘေးက သီဟိုဠ်ကိုယ်တော်ကိုမေးတော့ သီဟိုဠ်ဘာသာနဲ့ အမေလို့ ခေါ်လိုက်တာ တဲ့။
အော် ဘယ်အရွယ်မဆို အမေကို တဆဲ။
စထရိတ်တိုင်းမ်း အယ်ဒီတာ့အာဘော်က ဆရာကြီးနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်း
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/26/2015 - No comments
ဒီနေ့ စထရိတ်တိုင်းမ်း အယ်ဒီတာ့အာဘော်က ဆရာကြီးနှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ရေးလာပါတယ်။
*ပါတီခေါင်းဆောင်နှစ်ဦး သဘောထား မတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိ၊ နိုင်ငံရေးနည်းအားဖြင့်သာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ဖယ်ရှားတတ်ကြ။
*ဦးသိးစိန်နဲ့ ဦးရွှေမန်းအကြား ဖြစ်သွားပုံက လက်ရှိရောက်နေတဲ့ ပြောင်းလဲ မှုတွေကို အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေ။
*ဦးရွှေမန်းက ဦးသိးစိန်ကို စိန်ခေါ်လိုဟန်၊ ပြောင်းလဲမှု မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်စေလိုဟန်ရှိ၊ ဒေါ်စုနဲ့လည်း ရင်းနှီး၊ ဒါပေမဲ့ ညကြီးမင်းကြီး ရဲကားနဲ့ ဝိုင်းတာမျိုး လုံးဝမလုပ်သင့်။
*ဒေါ်စုက သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရှိပေမဲ့ သူမပါတီကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အခြေအနေကောင်းနိုင်။ ဒါကို စစ်တပ်က လက်ခံဖို့လို။
*ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး နိုင်ငံ့စီးပွားရေး ပြောင်းလဲ လာနိုင်။
*ဘယ် ပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ စီးပွားရေးသမားကမှ ခေါင်းဆောင်တစ်ေ ယာက်ကို ညကြီးမင်းကြီး ရဲကားနဲ့ဝိုင်းတာမျိုး မမြင်လို။
*အခြားနိုင်ငံတွေက ဝေဖန်နေချိန် အာစီယံက မြန်မာနဲ့အတူ ရပ်တည်ပေးခဲ့။ အိမ်နီးချင်းတွေက မြန်မာအစိုးရ လူလူသူသူ ဖြေရှင်းတာကို မြင်တွေ့လို တယ်ဆိုတာ သိထားဖို့လို။
ခေါင်း အရမ်းဖြူသော ရဟန်းက
ကျောင်းဒကာ သဒ္ဓါစိတ်ကို ပျက်စေတတ်သည်။
(အတိယာစကော အပ္ပိယော ဟောတိကို ထောက်)
ခေါင်း မကြာမကြာ ရိတ်နေတတ်သည်။
(ဘယ်ပါဠိတော်ကို ထောက်ရမလဲ မသိ)
ပြည်တွင်းက စာဖတ်ပရိသတ်ကို လေးစားသွားပြီ
in The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော် - on 8/25/2015 - No comments
ပဋ္ဌာန်းအရကောက်ကြီးလိုပဲလို့ တင်စားကြတဲ့ လူ့ယဉ်ကျေးမှုပဋိပက္ခ ပထမတွဲ ပြန်ရိုက်နေရသတဲ့။
ပြည်တွင်းက စာဖတ်ပရိသတ်ကို လေးစားသွားပြီ။ ဂယ်ဘဲ ဂယ်ဘဲ။
Labels: The Clash of Civilizations, ဇင်ဝေသော်
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/25/2015 - No comments
မြန်မာပြည်က သက်တန်း သိန်း၊ သောင်းကြာအောင် နေရတဲ့ သဒ္ဓါဓိကဘုရားရှင်တွေရဲ့ သာသနာတွင်းလို ဖြစ်နေတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးပဲ။ သူများတွေ လုံးဝအနားယူတဲ့ အသက် ၇၀ တန်းရောက်နေတာတောင် သမ္မတလုပ်ဖို့ မျက်စောင်းထိုးနေရတုန်း။
လက်ရှိကလည်း အနားယူရမယ့်အရွယ်လို့ မထင်သေးဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, နိုင်ငံရေး ဂျုတ် - on 8/25/2015 - No comments
"ဦးသိန်းစိန်ရေ၊ သစ်တစ်ပင်ခုတ်ဖို့ ငါးနာရီ အချိန်ရရင် ကျုပ်ကတော့ ပထမ လေးနာရီလုံးလုံး ထက်နေအောင် ပုဆိန်ထိုင်သွေးနေမိမှာပဲ။ ခင်ဗျား ရော ဘယ်လိုလဲ"
"ကျုပ်ကတော့ သစ်တစ်ပင်ခုတ်ဖို့ ငါးနာရီအချိန်ရရင် နောက်ထပ် ငါးနာရီ ထပ်တောင်းမိမှာပဲ ဦးလင်ကွန်းရဲ့"
"ဗျာ" တဲ့ လင်ကွန်းကြီးက။
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/24/2015 - No comments
လက်ရှိအစိုးရက ဘာသွားယုံရမလဲ မသိဘူး။
ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေ ပြန်လာစေချင်တယ်လည်း ဆိုသေး
ဦးဌေးဦးက သူလည်း သမ္မတဖြစ်ချင်တယ် ဆိုပြန်ရော။ ရှုပ်နေတာပဲ။
အရပ် ငါးပေ လေးလက်မသာရှိသော ဆရာတစ်ယောက်အတွက် အရပ် ငါးပေ ကိုးလက်မရှိသော တပည့်တစ်ယောက်ကို ကျန်းမာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ အာဟာရမျှတစွာ စားသုံးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးမစကားပြောရန် အခက်တွေ့နေနိုင်သလို အာဏာရှင်တစ်ယောက်အတွက် ဒီမိုကရေစီအကြောင်း လူထုကိုပြောပြရန်လည်း အခက်တွေ့နေနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာဆိုပြီး မျက်စေ့မှိတ် ပြေနေကြရဟန် တူပါသည်။
စင်္ကာပူမှာ မဲပေးဖို့ ဖောင်ဖြည့်သူ တကယ်ပဲ ရှစ်ထောင်ထဲ ဆိုရင်တော့
စင်္ကာပူမှာ မဲပေးဖို့ ဖောင်ဖြည့်သူ တကယ်ပဲ ရှစ်ထောင်ထဲ ဆိုရင်တော့ တော်တော်နည်းတာပဲ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းများစွာတွေထဲက တစ်ကြောင်းကတော့ ဘုန်းကြီးတွေ မဲပေးခွင့်မရှိတာပဲ။ မဲပေးခွင့်ရှိလို့ ဘယ်ဆရာတော် ဘယ်နေ့က ကြွလာပြီး ဖောင်ဖြည့်တယ် ဘာညာဆိုရင် သူ့နီးစပ်ရာတွေလည်း သေချာပေါက်ပါလာမှာ။ သတင်းလည်း ပိုလှုပ်မယ်။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/23/2015 - No comments
မိဘပြည်သူကြီးက တောင်းဆိုရင်တော့ သတ်ပုံသတ်ညွှန်းလေးတွေ ဂုစိုက်အုန်မဘာ။
ပြောသာပြောရတာ ကွကိုပြန်ဖတ်တော့ အမှား မရှိ၊ ပကတိ စင်းလုံးချောနေတာ။
လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပထမတွဲ စာမူကြမ်းတွေ အဖတ်ခိုင်းတော့ ဦးတင်မောင်ဝင်းဆီက မှတ်ချက်နဲ့ ပြန်လာတယ်၊ "ဘာကို ဆိုလိုမှန်း မသိ၊ ပြန်ရေးပါ" တဲ့။
သူ့တွေ့မှ ပြောဖြစ်တယ်၊ "ခင်ဗျားကသာ ဘာဆိုလိုမှန်း မသိတာ၊ ကျုပ်ဘာသာကျုပ် ဖတ်တော့ ချောနေတာပဲ၊ ဝါကျကသာရှည်တာ အဓိပ္ပါယ်က ရှင်းနေတာပဲလို့တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြောမိသေးတယ်" ဆိုတာ့ တဟားဟားနဲ့ ရယ်ပါလေရော။
ပစ္စတ္တံ ဝေဒိတဗ္ဗော ဝိညူဟိ၊
in 3D ဘာသာရေး, ဇင်ဝေသော် - on 8/22/2015 - No comments
Dhamma can be realized by the wises individually.
ဒီလိုဆိုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာက အင်ဒီဗီကျူယယ်လစ်ဇင်ပဲ။
Labels: 3D ဘာသာရေး, ဇင်ဝေသော်
မြန်မာပြည်မှာလည်း ကောင်းကွက်တွေ အများကြီးပါ
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/22/2015 - No comments
ကိုယ်က နောက်ကျနေရင် ကားလမ်းပိတ်နေလို့ ပြောလိုက်။
တစ်ခုခု အကြောင်းပြန်ဖို့ နောက်ကျနေရင် မီးပျက်နေလို့၊ အင်တာနက် မကောင်းလို့ ပြောလိုက်။
ရွာဖက်မှာဆို ဖုန်းလိုင်း မမိဘူး ပြောလိုက်၊ ပြီးရော၊ လွယ်လွယ်လေး။
(ကိုယ်တိုင် ဒီလိုပဲ လုပ်ခဲ့တာ)
အစိုးရမင်းများ မှတ်သားအတုယူ ကြကုန်
in ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, လူကြီးမင်းများသို့ - on 8/22/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Aye Thandar's post.
အမေရိကန် သံအမတ်ကြီးက ရခိုင်ဖက်မှာ လယ်ထဲဆင်းပြီး ပျိုးပါဝင်ကြဲပစ်လိုက်တာ
သွားလေရာ ထီးမိုး ဖိနပ်ကိုင် အိပ်ဆွဲ အပြည့်နဲ့လိုအပ်သည်များကို မှာစားသွားလေ့ ရှိတဲ့အစိုးရမင်းများ မှတ်သားအတုယူ ကြကုန်
Labels: ပြန်လည်မျှဝေခြင်း, လူကြီးမင်းများသို့
တို့ဆီက ဝန်ကြီးတွေက .... အမြဲ နုပျိုနေကြတယ် !
မြန်မာပြည်က ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ဖို့ စောင့်လိုက်ရတဲ့ နှစ်တွေ၊ ဂရိတို့များ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်၊ သုံးနှစ်အတွင်း သုံးကြိမ်။ လက်ရှိသမ္မတပေါက်စက နှုတ်ထွက်စာ တင်ပြန်သတဲ့။ တို့ဆီကတော့ နှုတ်မထွက်ဘူး၊ နောက်တစ်ကြိမ်၊ ပြည်သူက တောင်းဆိုရင် စသည်။
စလုံးနဲ့မြန်မာ တူတာက ဝန်ကြီးတွေကို လစာကောင်းကောင်းပေးထားမှ အကျင့်ပျက်မှု ကင်းရှင်းမှာဆိုတဲ့ အယူအဆပဲ။ မတူတာက သူတို့ စီနီယာဝန်ကြီးတွေက လူငယ်တွေကို နေရာပေးဖို့ဆိုပြီး နှုတ်ထွက်ပေးချိန်မှာ တို့ဆီက ဝန်ကြီးတွေက တစ်ယောက်မှ အသက်ကြီးပြီလို့ သူတို့ကိုသူတို့ မထင်တာပဲ။ အမြဲ နုပျိုနေကြတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 8/21/2015 - No comments
ရွာမှာ ဆရာမရှိဘဲ ပါရမီအရ နှဲမှုတ်ကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ အစပိုင်းတော့ ရွာနဲ့နီးစပ်ရာ ပွဲလေးတွေမှာ ဝင်ကူ၊ ဝင်မှုတ်ပေါ့။ သူ့အကြောင်းကို မန္တလေးရှိ စိန်ကျော်ဆင့်တိုလို ဆိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကအစ ကြားပြီးကမ်းလှမ်းလာတော့ သူက ရွာပွဲတွေမှာ မမှုတ်နိုင်တော့ဘူး၊ မန္တလေး ပါသွားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွာက ဒကာကြီးတစ်ယောက်က နှဲကောင်းရင် ရွာသားနားမထောင်ရတော့ဘူး ပြောရာက အဲဒီစကားတွင်သွားရော။
နောက်ပိုင်း အဲဒီစကားပုံက စာသင်သား ဦးဇင်းတွေ၊ ကိုရင်တွေဆီ ရောက်သွားတယ်။ စာမေးပွဲတွေ အဆင့်ဆင့်အောင်တဲ့ကိုယ်တော်၊ တရားဟောကောင်းတဲ့ကိုယ်တော် ပေါ်ပေါ်လာတိုင်း ဒီကိုယ်တော်ကတော့ ရွာပြန်မနေတော့ပါဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်နဲ့ " နှဲကောင်းရင် ရွာသားနားမထောင်ရတော့ဘူး" လို့ ပြောတတ်ကြတယ်။ တကယ်တော့ ဒီပြသနာက ကမ္ဘာနဲ့ချီတဲ့ ပြသနာပါ။
in 3D ဘာသာရေး, ဇင်ဝေသော် - on 8/21/2015 - No comments
ဟိုတလောလေးကမှ ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြသေးတယ်။ နောက် ဆို ကျောင်းလွတ်တွေ အများကြီးရှိလာမှာပါဆို။ တကယ်လား မသိဘူး။ ပါလာပြီ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ညီနောင်တွေ ဆက်သွယ်တော်မူကြပေရော့။ (ဦးတေဇဝန္တ ကွန်မင့်အရ ၂၀၁၄ က ကြော်ငြာပါတဲ့ဘုရား။ ဘုန်းကြီး ရ၊ မရ တော့ မသေချာသေး၊ ကြိုးစားကြည့်ပေါ့ဘုရား။ ဖုန်းတစ်ချက်ပါပဲ။)
photo from Aung Pyi Sone Aye's facebook
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 8/21/2015 - No comments
ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်၊ ကိုကာကိုလာသောက်နေတိုင်း အနောက်တိုင်း ကို ထောက်ခံတယ် ပြောလို့ မရဘူး၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်၊ ကိုကာကိုလာသောက်နေတဲ့ လူတစ်စုရဲ့ ခါးမှာ အမေရိကန်လေယာဉ်ကို ဖောက်ခွဲဖို့ ဗုံးတွေ ခါးပတ်လာနိုင်တယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်၊ ပြင်သစ်မိတ်ကပ်လူး၊ အနောက်တိုင်းတီးဝိုင်းပုံ တီရှပ်ဝတ်ထားတဲ့ လူငယ်တွေဆီမှာ အဓိက မြန်မာ့ ကိုယ့်ကျင့်တရား တန်ဖိုးတွေ မရှိတော့ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ အလောင်ဘုရား ဝတ်စုံ မဝတ်လည်း ခေတ်သစ် စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ အသက်ပေးကာကွယ်ခွင့် ရှိနေပါတယ်။
အဲသလောက်ကြီး နောက်ကျကျန်ခဲ့တာကို စိတ်မကောင်းလို့
ထေရဝါဒချင်း တူတယ်ဆိုတာကလွဲရင် သီဟိုဠ်နဲ့ မြန်မာလူထုကြီးရဲ့ လိုက်ဖ် စတိုင်က တူတာမရှိသလောက်ပဲ။
သူတို့ ဘုရားတွေသွားရင် အဝတ်ဖြူနဲ့ အုန်းဆီ ခေါင်းလိမ်းဆီနံ့နဲ့။
မြန်မာ ဘုရားတွေပေါ်မှာဆို အဝတ်အစားက ရောင်စုံ၊ အမွှေးနံသာ၊ မိတ်ကပ် ဘာညာကလည်း အစုံပဲ။
အစားအစာလည်း အတူတူပဲ။ မြန်မာက အခုမှ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး ဖွင့်ကာစ ရှိသေးတယ် ကမ္ဘာ့အစားအစာ အစုံနီးပါး ရနေပြီ။ လူတွေကလည်း စားကြ တယ်။
ရှေးဟောင်းအစဉ်အလာက ဒါကို အသုံးအဖြုန်းကြီးတယ်ပြောတယ်။ ခေတ် သစ် စီးပွားရေးက ဒါမှ ပြည်တွင်းစားသုံးအား ကောင်းတာ၊ စီးပွားရေး အသက် ဝင်တာ တဲ့။
ငွေကြေးကို အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တာကတောင် ကာရင်စီ ပဲ။ ငွေရှာပြီး ရှေးခေတ် ကလို ခေါင်းအုံးအောက် ထိုးထား၊ ဝါလုံးခေါင်းထဲ ထည့်စုထားရင်တော့ ကာရင်စီ မဟုတ်တော့ဘူး။
ဝေဖန်နေတာ မဟုတ်ဘူး၊ အဲသလောက် ပြင်ပယဉ်ကျေးမှုကို လက်ခံနိုင်တဲ့ လူမျိုးက အဲသလောက်ကြီး နောက်ကျကျန်ခဲ့တာကို စိတ်မကောင်းလို့။
ရွှေကူမေနှင်းထံသို.အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (အလင်းရောင် ဆိုသူရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်)
in Politics, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 8/21/2015 - No comments
ရှယ်မရလို့ ကော်ပီ၊ ပေ့စ်လိုက်ရကြောင်း။ ဦးတင်မောင်ဝင်းဝေါပေါ်က အလင်းရောင် ဆိုသူရဲ့ တုန့်ပြန်ချက်။
၁၉၉၀ တုန်းက NLD ကနေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သေးတယ်ဆို ၊ နောက်မှ ပါတီ က ထွက်သွားပြီး ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ပြောတာပဲ ။ ဆရာမကိုပြောပြချင်တာက အီစွတ်ပုံပြင်လေးပါ ၊ အပင်မြင့်ပေါ်က မှည်.၀င်းနေတဲ့စပျစ်သီးတွေ က ချဉ်များနေသလား ဆရာမရယ် ၊ ဆရာမရယ်နော် ။ ဒါလေးပါပဲနော် ..
ဖွတ်ကလိတွေအကြောင်းနည်းနည်းပြောဦးမယ် ။ ဖွတ်ကလိတွေက တကယ်တော့ သနားစရာဗျ သူတို.မှာကိုယ်ပိုင်ဥာဏ် ကိုယ်ပိုင်ဟန် ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ်ဘာမှမရှိဘူး ။
(၂)လူမကြည်.ဘဲပါတီကိုမဲပေးပါပြောတော့ ဆရာမကပြောတယ် " ဒီ သဘော တရား၊ဒီခံယူချက်က နှစ်ပေါင်းခုနစ်ဆယ်လောက်နောက်ကျသွားပါပြီ "။ တကယ်တော့ သဘောတရားကနောက်ကျတာမဟုတ်ပါဘူး ဆရာမရယ် ဆရာမက နှစ်ပေါင်းခုနစ်ဆယ်လောက်ကျန်နေခဲ့တာပါ ။ နှစ်ပေါင်း ခုနစ်ဆယ် မကျန်ခဲ့ရင်တောင် န၀တ နအဖ လက်ထက်ကနေ ဆရာမဦးနှောက်တွေရှေ. ဆက်တက်မလာတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခဗျာ။ ဒါမှမဟုတ်လည်း အခုထိ နိုင် ငံရေးအမြင်မှန်အောင်မကြည်.တတ်သေးတာပါ။ ဆရာမပြောတယ် နယ်ချဲ. လက်အောက်ကနေ လွတ်ရမှာမို. ဗိုလ်ချုပ်ကပြောခဲ့တယ်၊ အခုရော ဘာထူးလဲ ဆရာမ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်ကနေ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်နေရ တာပါ။ ဘယ်မှာလဲစစ်အာဏာရှင်လို.ဆရာမ ငြင်းချင်သေး လား၊ အမှန်တရား ဆိုတာ ပန်ကန်ပြားနဲ.ဖုံးသလိုဖုံးလို.မရပါဘူး၊ လွှတ်တော်ထဲ ပြည်သူ.ဆန္ဒ မပါဘဲ ၀င်နေတဲ့ အစိတ်သား၊ သူတို.ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ဖွဲ.စည်းပုံပုဒ်မတွေဟာ
လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို. စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာမီးမောင်းထိုးပြနေပါတယ်။ မိုးကြိုးပစ်တာကို ထန်းလက်နဲ.ကာဖို.မကြိုးစားပါနဲ.၊ ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေ နဲ ဖုံးဖို.မကြိုးစားပါနဲ.။ အဲဒါတွေကိုဖယ်ရှားပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်လုပ်ဖို. လူမကြည်.ဘဲပါတီကြည်.မဲပေးပါပြောတာဟာ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကနေ လွတ်အောင်လွတ်တဲ့ ဖဆပလ နဲ. အခု စစ်ကျွန်အောက်ကနေ လွတ်အောင လုပ်နေတဲ့ NLD ဘယ်နေရာများ ပုံစံမတူဖြစ်နေရတာလဲ ။
NLD ကို ပါတီကိုကြည်.မဲမပေးဘဲ ၊ လူတွေကြည်.မဲပေးပါလို. မဲတွေကွဲပြီး ကြံ.ဖွတ်က အစိုးရလုပ်အုပ်ချုပ်ပြီး စစ်အစိုးရလက်အောက်က မလွတ်ခဲ့ ဘဲ နိုင်ငံပျက်ခဲ့ရင် ပြည်သူတွေ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တာလို. ဒုက္ခဖြစ်ခဲ့ရင် ဆရာမ ဘာတာဝန်ယူမှာပါလဲ ၊ ဆရာမ အဲဒီစစ်အစိုးရကိုဖယ်ရှားဖို. ဘယ်လိုတွေများ လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာ သိချင်စမ်းပါဘိဗျာ။
အင်္ဂလိပ်နဲ. အခုလက်ရှိ စစ်အာဏာရှင်ဘယ်သူဆိုးတယ်ယှဉ်ဦးမလား။ ပညာ တတ်ပြီးလူစိတ်နည်းနည်းရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်နဲ. ကိုယ်ကျိုးတခုတည်းကြည်.ပြီး ပညာမဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ ဘယ်သူက ပိုဆိုးလဲဆိုတာ ဆရာမလည်းစာဖတ်သူမို. ကျွန်တော်ရှင်းပြစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး အင်္ဂလိပ် နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော် အုပ်ချုပ်ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအခြေအနေနဲ. စစ်အစိုးရ နှစ်၅၀ အုပ်ချုပ်ပြီးဖြစ် ခဲ့ တဲ့နိုင်ငံအခြေအနေ သဘာဝသယံဇာတ ၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဂျပန်ခေတ် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေအကျဉ်းသားတွေကို ထားတဲ့ အခြေအနေ၊ သယံဇာတကို ယူတာခြင်းတူတူ နောက်လူတွက်ကြည်.တဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ. ဘယ်သူအတွက်မှမကြည်.တဲ့ အစိုးရ ယှဉ်ပြောနေဖို.လိုမယ်တောင် မထင်။
နောက်အင်္ဂလိပ်က အခုအစိုးရထက်လူကြီးလူကောင်းပိုပီသတယ် ဖာမကျဘူး ဆိုတာသမိုင်းတွေဖတ်ဖူးတယ်ဆိုရင် ဆရာမသိမှာပါ။ အင်္ဂလိပ် ကိုမြှောက်ေ နတာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ မကောင်းတာခြင်းတူတောင် ဘယ်သူပိုဆိုးနေတယ်ဆိုတာပြောပြနေတာ ၊မုဒိန်းကျင့်ပြီးမှ ကိုယ်ဝန်ရမှာစိုးလို. သန္ဓေတားဆေးတိုက်တာဟာ ကျေးဇူးတင်စရာလို.
ကျွန်တော်တော့မမြင်ပါဘူး ။ ဒီလိုဒီခေတ် ဒီစနစ်ကိုမှ မမြင်ဘဲ ပြည်ထောင်စုတွေဘာတွေလျောက်ပြောနေတာ
သူများနှစ်ခုနစ်ဆယ်ကျန်တယ်ပြောရင်ဆရာမက သီပေါမင်းခေတ်က နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်အမြင်တွေဖြစ်နေတယ်လို. အားနာနာနဲ.ပြောရမှာပဲဆရာမရယ် ။
နောက်ထပ်ပြောဦးမယ် ၊" လူကိုမကြည်.နဲဆိုတာ လူထုကိုစော်ကားတာ " ။ ဟေ ဒါပြောတာကို လူထုကိုစော်ကားတာလို. ဆရာမစွတ်ဆွဲတယ်ဆို ၊ ပြည်သူကိုပါးရိုက်မယ် ထမင်းတနပ်ပဲစား ၊ မီးမလာရင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်း
ပြောတုန်းက ၊ ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကို ဒါမျိုးအလကားစားရလို. ဖြစ်ပါစေဆုတောင်းမနေနဲ.တို.ပြောတုန်းက ဆရာမ ဘယ်နားများသွားအိပ်ပျော်နေတုန်းဗျာ ။ ဆရာမ အသံထွက်တာ ကျွန်တော်မတွေ.ခဲ့ရပါလား ။
လူထုကို ဒေါ်စုက အမိန်.ပေးတယ်ဘာညာဆိုပြီး ဆရာမ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်တွေပြောတာ ရှက်ဖို.ကောင်းပါတယ် ၊ ဘယ်သူတွေက ပြည်သူတွေအပေါ် အမိန်တွေအာဏာတွေနဲ.အုပ်ချုပ်နေတယ် ဆိုတာ ပြည်သူလူထုက ဟောဒီ
နောက်တခု ရှစ်ပူးတွေနဲ. ဆရာမ လှည်.တိုက်ပြန်တယ်နော် ၊ တကယ်တိုင်းပြည်အတွက်အနစ်နာခံနေတဲ့သူတွေဆီက ဘာသံမှမကြားရပါလား သူတို.အားလုံးရင်ထဲရှိနေတာ နေရာမဟုတ်ဘူးဆရာမ ၊ စစ်အစိုးရ
ပြုတ်ကျရေးပဲ ၊ ဒီတော့ ဘယ်သူပါပါမပါပါ ဘယ်အရာဟာအရေးကြီးဆုံးဆိုတာမြင်တယ်ဆရာမ ၊ ဓမ္မပဒထဲက ခြင်္သေ့နဲ.ခွေးလို.ပေါ့ခင်ဗျာ ။ ခွေးဆိုတာ ဂဲလာရင်လမ်းကြောင်းမမြင်ဂဲကိုသာကိုက်တတ်၏ ၊ ခြင်္သေ့သည်ကား
ဂဲမြှားလာရာ လမ်းကြောင်းကို လိုက်ပြီး ပစ်သူကိုနှိမ်နင်းတတ်၏တဲ့ ။ သူတို.အားလုံးက အရင်းအမြစ်ကိုမြင်တဲ့သူတွေကြီးပါပဲဆရာမရယ် ။ ဒါကြောင့်ရန်မဖြစ်ကျတာပေါ့ဆရာမရယ် ။ အရင်းအမြစ်ကိုမြင်ဖို. သိပ်အရေးကြီးတယ်ဆရာမရေ။
နောက်တခု ဆရာမကပြောပြန်တယ် လူကောင်းလူဆိုး ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ဗြောင်ပြောမယ်နော် စိတ်မဆိုးကြေး ။ NLD က လွှတ်တော်အမတ်တွေက ဘာမှအသုံးမကျရင်တောင် ကြံ.ဖွတ်ထက်တော့ သာမှာကြီးပဲ ၊
ဘာဖြစ်လို.လဲ သူခိုးမပါလို.ဘဲ ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားလုပ်မယ့်သူမပါလို.ဘဲ ၊ အဲဒါတချက်တည်းနဲ.တင်မဲပေးပျော်နေပါပြီဆရာမရယ် ၊ ကြံ.ဖွတ်အမတ်တွေနဲ.အခြားဘာပါတီညာပါတီအမတ်တွေ NLD လို ပိုင်ဆိုင်မှုကြော်ငြာဖို.ဆရာမ
အာမခံရဲလား ၊ သတ္တိရှိတယ် လူဆိုးလူကောင်းကွဲချင်တယ်ဆို ဆရာမ အဲဒါလေးဖြစ်ဖို.ကြိုးစားကြည်.လိုက်စမ်းပါခင်ဗျာ ။ ပြည်သူတွေလူကိုရွေးပြီး မဲပေးလို.ရတာပေါ့ဗျာ ။ စိန်သလားဟေ့ မောင်တို.ရေပေါ့ဗျာ ။
နောက်လွှတ်တော်အမတ်ဆယ်သိန်းလာပြောနေသေးလို.ထပ်ပြောပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆရာမရယ် ၊ ဆယ်သိန်းအလကားလာယူပြီးအိပ်ငိုက်နေတဲ့သူတွေကို အရင်ပြောပါဆရာမရယ် ၊ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေမှန်းမသိတဲ့ ၊ ဘာတွေလုပ်မယ်
မှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေကို ဆရာမက ဆယ်သိန်းညာယူမယ်လို.ပြောနေတာဟာ သဘာဝမကျပါဘူးဗျာ ။ ဆရာမ အခုမှ ဆယ်သိန်းကိစ္စလာပြောနေတယ် ပြည်သူအကျိုးမပြုတဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နေပြီး လွှတ်တော်ထဲဝင်ပေါက်ပန်းဆေးပြော
နေတဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေကို ဆရာမ ထောက်ပြတာ တခါမှမတွေ.ဖူးသေးဘူး ။ ဘက်မျှချင်ရင် ရိုးသားမှုဆိုတာ အခြေခံရပါတယ်ဆရာမ ။ဆရာမ ပြည်သူအတွက်ဆိုရင် ပြည်သူဆန္ဒမပါဘဲ ၀င်နေတဲ့အစိတ်သားကို ဖယ်ရှားဖို.ကြိုးစားပေးရပါမယ်ဆရာမ ။ ပြီးတော့
စာရေးစားတယ်ဆိုတာ ပြည်သူကျွေးတဲ့ထမင်းစားတာပါပဲ ၊ ပြည်သူ.ထမင်းစားပြီး ပြည်သူလုထုကို ဖိနှိပ်နေတဲ့ စစ်အစိုးရကို ဖယ်ရှာပေးဖို.မကြိုးစားဘဲ ဖယ်ရှားဖို.ကြိုးစားပေးနေသူကို ပြောနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုစေတနာမျိုးလဲလို.
သံသယဖြစ်စရာကြီးဆရာမရယ် ။ ဆရာမအခုလုပ်နေတဲ့ပုံစံကို ဥပမာပေးလိုက်ပါဦးမယ် ။ ဥပမာက နည်းနည်းရိုင်းပြီးထင်ရှားလေတော့ နားနဲ.မနာဖ၀ါးနဲ.နာပါဆရာမ
ဆရာမလုပ်နေပုံက ကိုယ့်နှမသားချင်းကို လူတယောက်က အတင်းခွပြီး ဗလက္ကာရလုပ်ဖို.ကြိုးစားနေတာကို မဖယ်ရှားဘဲ ဘေးကနေကြည်.နေပြီး ၊ " နောက်လူတက်လာရင်ရော ဘယ်လိုခွမှာလည်း ၊ ညာလိုခွမှာလည်း ၊ နောက်တက်မှာက
လူကောင်းလား ၊ လူဆိုးလား ၊ လူဖြူလား လူမဲလား လုပ်နေသလိုပါပဲ " ဆရာမ လက်ပေါ်ပဲ နဖူးတင်တင် ၊ နဖူးပေါ်ပဲလက်တင်တင် စဉ်းစားပါ ၊ အပေါ်ခွနေတဲ့ သူကို အရင်ဖယ်ထုတ်မလား နောက်လူကိုတွေးအပြစ်တင်မလား ။
လူဖြူမို. မကြိုက် လူမဲမို.မကြိုက် ၊ မူမကောင်းလို.မကြိုက်လုပ်နေမလား ဆိုတာလေးပါ ။ အရေးကြီးတာနဲ. အရေးပါတာကို ခွဲခြားသိပါလေဆရာမရယ် ၊ နွားရှေ.ထွန်ကျူးသလိုဖြစ်ရင် မလိမ်မာ အခါခါမိုက်ကျွန်တော့်ကိုတော့ နားလည်ပေးပါ ။
(၄) ဆရာမ တကယ်ပြည်သူအပေါ်စေတနာရှိတယ် ဆိုရင် မျှမျှတတဖြစ်အောင် လွှတ်တော်ထဲက အစိတ်သားထွက်သွားဖို.တွန်းအားပေးပါ ။ အဲဒါထွက်သွားပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်စုက ပါတီကိုပဲကြည်.မဲ့ပေးပါ
လူမကြည်.ပါနဲ.ဆို ဆရာမကြိုက်တဲ့အပြစ်တင်လိုက်စမ်းပါဗျာ ။ ကဲ့ရဲ.လိုက်စမ်းပါ ၊ရှံ.ချလိုက်စမ်းပါဗျာ ။ အခုက ဖဲဒိုင်ကလည်းသူတို. ဖဲချိုးတော့လည်း သူတို. ၊ ဖဲဝေတော့လည်းသူတို. ဖဲသမားတွေကလည်း ဒီလူတွေပဲဖြစ်နေတဲ့
အခြေအနေကနေ ပြည်သူက စစ်စစ်မှန်မှန်ရွေးချယ်နိုင်မယ့် အခြေအနေတရပ်ကိုရောက်အောင်ဆရာမ စာတွေရေးလိုက်စမ်းပါဗျာ ၊ ကိုယ့်ကလောင်ကနေ ဖွတ်ရောင်မင်တွေမထွက်ပါနဲ.ဆရာမရယ် ။
၁၉၉၀ တုန်းက NLD ကနေ ရွေးကောက်ပွဲဝင်သေးတယ်ဆို ၊ နောက်မှ ပါတီကထွက်သွားပြီး ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ပြောတာပဲ ။ ဆရာမကိုပြောပြချင်တာက အီစွတ်ပုံပြင်လေးပါ ၊ အပင်မြင့်ပေါ်က မှည်.၀င်းနေတဲ့စပျစ်သီးတွေ က ချဉ်များနေသလား ဆရာမရယ် ၊ ဆရာမရယ်နော် ။ ဒါလေးပါပဲနော် ...........
ဆရာမပုံကိုတော့ ခွင့်မတောင်းဘဲ ယူသုံးလိုက်ပါသည် ။ မူပိုင်ခွင့်အတွက် ဇူကာဘတ်ထံတင်ပြလိုက်ပါမည်။
Labels: Politics, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း
ဆရာမကြီးက ဆော်သားပဲ။ အသလိုလူလည်း ရှိမှပေါ့။
in Politics, ပြန်လည်မျှဝေခြင်း - on 8/20/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared Ven Itthasara's post.
လူမကြည့်ပဲ ပါတီတံဆိပ်ကိုသာကြည့်ပြီး မဲပေးပါဆိုတဲ့စကားကို ဆရာမ ရွှေကူမေနှင်းက အခုလို ဝေဖန်ထောက်ပြထားပါတယ်။
ပဟေဠိဆန်ဆန် (land of mystery)' နိုင်ငံပါပဲ
in Politics, ကစ်ဆင်းဂျား - on 8/20/2015 - No comments
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက် တရုတ်နဲ့အမေရိကန် ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက် နေခဲ့ပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးပြန်လည် စတင်ဖို့ ၁၉၇၁- ခုနှစ်က တရုတ်ပြည် ကို ပထမဆုံးအခေါက် ကျွန်တော်ရောက်စဉ်မှာ "အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အတွက်တော့ တရုတ်ပြည်ဟာ နားလည်ရ ခက်တဲ့ 'ပဟေဠိဆန်ဆန် (land of mystery)' နိုင်ငံပါပဲ" လို့ပြောတော့ ပရီးမီးယာ ကျောက်အိမ်လိုင်က ”တရုတ်ပြည်နဲ့ ပိုပြီး ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သွားရင် အရင်ကလောက် နားလည်ရခက်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး” လို့ ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်ထဲမှာ လူဦးရေ သန်းကိုးရာရှိနေပေမဲ့ သူတို့အတွက်တော့ အရာခပ်သိမ်းဟာ ပုံမှန်ပါပဲလို့ သူက မှတ်ချက်ထပ်ပေးပါတယ်။
Labels: Politics, ကစ်ဆင်းဂျား
အင်္ဂလိပ်စာက အသံထွက် မငြိမ်ဘူး
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/20/2015 - No comments
သာသနာ့တက္ကသိုလ်က ဆရာတော် မိန့်တာကို သတိရတယ် "အင်္ဂလိပ်စာက အသံထွက် မငြိမ်ဘူး" တဲ့။
အမှန်ပဲ။ "Busy" က ဘူးဇီးဖြစ်ရမှာ ဘီးဇီးလာဖြစ်နေတယ်။ ဒါပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး။
Lazy က ပျင်းရိသော၊ laziness ပျင်းရိခြင်း။ ဖြစ်သင့်တာက busy က အလုပ်ရှုပ်သော ဆိုရင် business က အလုပ်ရှုပ်ခြင်းပဲ။ အခုတော့ business က စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တဲ့။ အင်္ဂလိပ်စာကတော့ မနိုင်ဘူး။
ရွာမှာ လျပ်စစ်မီး ရသွားပြီတို့ ဘာတို့
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/20/2015 - No comments
၁။ က သတင်းစာ ကာတွန်းလေးကို သဘောကျလို့။
၂၊ ၃၊ ၄။ ကတော့ ရွာမှာ လျပ်စစ်မီး ရသွားပြီတို့ ဘာတို့ပေါ့။ နယ်အတွက် အစိုးရက သိန်း ၅၇၀ ဆိုလား (အတိအကျ မမှတ်မိ) ချပေးသတဲ့။ ကျန်တာတော့ ရွာ၊ နီးစပ်ရာနဲ့ ကမ်းလက်တို့ ကမကထပြုပေါ့။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/19/2015 - No comments
၁။ ဆရာကြီးနှစ်ယောက် ကွဲကြပြဲကြသတင်းကို စထရိတ်တိုင်းမ်က စာမျက်နှာပြည့်တောင် ဖော်ပြထားလေရဲ့။
မြန်မာတွေအတွက် သိပ် မထူးလှပါဘူး၊ ဒေါ်စုက ဦးရွှေမန်းနဲ့ ပူးပေါင်းသွားမယ်၊ အစိုးရပါတီတွင်း အကွဲအပြဲကြောင့် အဖွဲ့ချုပ် အခြေအနေ ပိုကောင်းသွားမယ် လို့ ပြောပြီး......
အောက်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုအဖွဲ့ဝင် အများစုကလည်း သမ္မတက မျက်ကွယ်ပြုထားချိန်မှာ ဦးရွှေမန်းက ရပ်တည်ပေးထားခဲ့လို့ ဦးရွှေမန်းဖက်ကနေ ရှိနေမယ် ဆိုတာလောက်ပါပဲ။
၂။ စင်္ကာပူက နှစ် ၅၀ မြောက် ရွှေရတုအမှတ်တရ ၁၀ တန်နဲ့ ၅၀ တန် ငွေစက္ကူအသစ်တွေ ထုတ်ပြီး ၅၀ တန် ပေါ်မှာ ကွယ်လွန်သွားသူ မစ္စတာလီကွမ်ယုရဲ့ ပုံ ပါဝင်ပါသတဲ့။ (အဖြူရောင်၊ လက်သီးလက်မောင်း တန်းနေပုံ)
သူတို့က မြန်မာစစ်အစိုးရအဆက်ဆက် သုံးတဲ့ တိရစ္ဆာန်ပုံတွေ သဘောမကျကြဘူး ထင်ပါရဲ့။ ဒေါရစ်ကို ငွေစက္ကူအသစ်ရပြီလားမေးတော့ ဘဏ်ရှေ့မှာ တန်းစီရတာ အကြာကြီးနေမှာလို့ ပြောတယ်။
in ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 8/18/2015 - No comments
ဝဲမှ ယာ။ ဘုန်းဇင်ဝေသော် (ဘုန်းဇင် (သို့) ဘုန်းသော်)၊ ဘန္တေရာဇ (စင်္ကာပူရီးယန်း)၊ ဘန္တေသီလာနန္ဒ (သီဟိုဠ်)၊
(ယာဘက်အဆုံး၊ ဒေါက်တာ အာစာရ။ အခု မရှိတော့၊ ရာဟုလာ ကျောင်းတည်ထောင်နေ။
သူ့နေရာ လက်ရှိတစ်ပါးကို ဒုတိယပုံမှာရှုပါ။ အရှင်စက္ကပါလ။
မယားကြီးနှင့် ဒုလ္လဘရဟန်း (သုံးသပ်ချက်)
in 3D ဘာသာရေး, သီဟနာဒ - on 8/18/2015 - No comments
တစ်ခုတည်းသော ဝိနည်ပညတ်ချက်အောက်မှာ နေထိုင်ကျင့်သုံးနေကြ သည့် ထေရဝါဒ ရဟန်းတော်များ၊ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းများ တူညီကြသော် လည်း လက်တွေ့ ကျင့်သုံးမှုမှာ အနည်းငယ် ကွဲလွဲနေကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ကထင်သည်၊ ကျောင်းမှာ ဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲလုပ်တော့ သီဟိုဠ် ရဟန်းများကသာမက သီဟိုဠ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အကြွမ်းတဝင်ရှိသည့် တရုတ် ဒကာ၊ ဒကာမအချို့ကပါ သာမန်လူတစ်ယောက်က ချက်ချင်း ရဟန်းဝတ်လို့ ရပါသလားဟု မေးကြသည်။
အမှန်ကတေတာ့ ရပါသည်ဟု ဖြေရပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်......
သီဟိုဠ်ယဉ်ကျေးမှုအရ ရဟန်းမဝတ်ခင်ကတည်းက လူထွက်မည့်ရက် တွဲပါလာလျင် လုံးဝ ရဟန်းခံမပေးပါ။ နောက်မှ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လူထွက်ခြင်းက အပြစ်ဆိုဖွယ် မရှိသော်လည်း မဝတ်ခင်က လူထွက်မည့် ရက် တစ်ပါတည်း ပါလာခြင်းကတော့ မဖြစ်သင့်ဟု (သံဃာကိုပင် စော် ကားမော်ကား လုပ်ရာရောက်သည်ဟု တချို့က ယူဆကြ) ယူဆပြီး ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ရဟန်းဘောင် တက်မပေးကြခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုက ရိုးစင်းသည်၊ ရဟန်း ဝတ်လိုသူ မည်သူ့ကိုမှ မတား ဆိုသည့် အယူအဆရှိပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း ဝတ်မည့်သူကိုပင် သာမဏေ ခဏဝတ်အပြီး ရဟန်းခံပေးလိုက်သည်။
ယခုခေတ် မတော်တရော် ဒုလ္လဘများ ပိုများလာချိန်၌ ရဟန်းဖြစ်ခွင့် ဈေးချို လွန်းသလို ဖြစ်သွားနိုင်ပေသည်။
ထို တစ်နှစ်သာ ဒုလ္လဘရဟန်းခံပွဲ ပြုလုပ်ဖြစ်ပြီး မလုပ်ဖြစ်တော့ပါ၊ ကုသိုလ် ရချင်ရင် သာမဏေဘဝ၊ ဆယ်ပါးသီလထိန်းရင်း ကုသိုလ်ယူပါ၊ ဝိနည်း မသိ၊ ဘာမသိ အပြစ်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုသာ ပြောဖြစ်တော့သည်။
ရဟန်းဝတ် လိုသူ မှန်သမျှကို မတားမြစ်အပ်သော်လည်း မဝတ်ခင်က လူ ထွက်မည့်ရက် ပါလာသူကို ရဟန်းပြုပေးအပ်၊ မပေးအပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ကား ယဉ်ကျေးမှုကြီးနှစ်ခု အယူအဆ မတူကြပါပေ။
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောရဦးမယ်။ အခု အသက် အကြီးဆုံး၊ ဝါအငယ်ဆုံး အတူနေ စလုံးဘုန်းကြီးဘွဲ့က ရာဇ တဲ့။ ဦးရာဇပေါ့။ သံသယရှိလို့ ဘွဲ့အရှည်က ဘာလဲ၊ ဒါပဲလားမေးတော့ ဒါပဲတဲ့။ ရှေ့ကလည်း မပါ၊ နောက်ကလည်း မပါဘူး တဲ့။ မဟာစည်ဌာနချုပ်မှာ ရဟန်းဖြစ်ခဲ့တာ။ အချင်းချင်းဆိုတော့ ပြုံးမိတယ်။ ခဏတဖြုတ်ဝတ်မယ့် ဒုလ္လဘလို့ ယူဆပြီး ဘွဲ့ကတောင် တိုနံ့နံ့ပဲ။ အခု ဦးရာဇက ဆယ်ဝါတောင် အတော် ကျော်နေပြီ။ အခု ဘွဲ့က နည်းနည်းတိုနေသလိုလို။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/18/2015 - No comments
၁၊ ၂။ ဦးရွှေမန်းအတွက် ရွေးစရာ သိပ်မရှိဘူးဆိုပဲ။ လှုပ်လေမြုတ်လေ အနေအထားမျိုးပေါ့။ စစ်တပ်အတွင်းမှာ သူနဲ့ ဦးသိန်းစိန်ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့် ကြသတဲ့။ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ မိသားစုက ရွာမှာပဲရှိနေ၊ သူ သမ္မတဖြစ်လာတဲ့နောက်မှာလည်း ထူးထူးခြားခြား ဘာမှ ပြောင်းလဲမလာဘူး။ (ထင်သာမြင်သာအောင် ကျိကျိတက် ချမ်းသာမလာဘူး)။
ဦးရွှေမန်းသား နှစ်ယောက်က ချမ်းသာလှပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ဘလက် လစ်တ် ထဲမှာပါနေတော့ စစ်တပ်က လက်ရှိ သမ္မတဖက်မှာ ရှိနေမယ်ပေါ့။
၃၊၄။ ဘန်ကောက် ဗုံးသတင်းက စိတ်မကောင်းစရာတွေကြားကနေ ပြုံးစရာလေးတစ်ခု တွေ့လိုက်ရတယ်။ လူတိုင်းက တတ်နိုင်သလောက် အကူအညီ ပေးနေချိန် တချို့ကတော့ ဓာတ်ပုံပဲ ရိုက်နေကြသတဲ့၊ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ တင်ဖို့နေမှာပေါ့လေ။
in ဇင်ဝေသော်, အမျိုးသားရေး - on 8/17/2015 - No comments
နှစ်ပတ်အတွင်း စပါးပြန်မစိုက်နိုင်ရင် အစာရေစာ ဒုက္ခတွေ့နိုင်တယ်၊ လယ်သမားတွေ စပါးပြန်စိုက်နိုင်ဖို့ အကူအညီတွေ လိုတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်က သတိပေးပါသတဲ့။ (ရိုက်တာ)
ဦးသိန်းစိန်ကတော့ ဘုရားဆင်းတုတွေ ပေးဝေဖို့ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေဆိုလား တွေ့လိုက်ရတယ်။
နိုင်ငံခြားရောက် အလုပ်သမားတွေ နေစရာအိမ် အတည်တကျမရှိဘဲ ကံစမ်းမဲ ဘုရားဆင်းတုပေါက်သလိုတော့ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဘုန်းကြီးတစ်ပါး ဆွမ်းကပ်ရင်တောင် (နေရာထိုင်ခင်းကအစ) လူဆယ်ယောက် ဖိတ်ကျွေးသလောက် ပြင်ဆင်ယူရတာမျိုး။ ကုသိုလ်ရေးပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ခါ..........
in ကဗျာ, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ - on 8/16/2015 - No comments
(ဒဏ်ရာတွေက မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း)
photo from U Tun Lwin's facebook
Labels: ကဗျာ, ဇင်ဝေသော်, အမှတ်တရ
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 8/16/2015 - No comments
အောင်လက်မှတ်နဲ့ ဆုလွယ်အိပ် ပေးအပ်ပွဲ
ကလေးတွေ၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေနဲ့ ဘုန်းကြီးသုံးပါး
(ဒီနှစ် ကရင်လွယ်အိပ် ပေးသတဲ့၊ မနှစ်က ရှမ်းလွယ်အိပ်ထင်တာပဲ)
ဦးသန်းရွှေ အသက်ရှင်နေသေးရင် တရုတ်သမိုင်းကို လေ့လာပါ။
in ဇင်ဝေသော်, လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ္ဘာ့အမြင် (လီကွမ်ယု) - on 8/15/2015 - No comments
မေး ။ ။ ထိပ်တန်းအဆင့်က အရာရှိကြီးတွေ သဘောထားချင်း မတိုက်ဆိုင်လို့ ကွဲသွား တာမျိုးရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ ဝမ်ကျားပေါင် ရာထူးရှိနေစဉ်တုန်းက သူဟာ နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲ လိုသူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ အကြောင်းတောင် သူက ဆက်စပ် ပြောပြနေသေးတယ်။
ဖြေ ။ ။ ဒါပေမဲ့ သူက နံပါက်တစ် မဟုတ်ဘူး။ နံပါက်သုံးအဆင့်ပဲ ရှိတယ်။ နံပါက်သုံးအဆင့်က ဒါမျိုး ပြောတယ်ဆိုတာကလည်း ကောင်းတဲ့အချက်ပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက ကျန်ဇီမင်းက အာဏာကို ကိုင်ထား တုန်းပဲ။ သူတို့ ထိပ်တန်းအဆင့် အရာရှိကြီးတွေကြားမှာ ဝမ်ကျာင်းပေါင်နဲ့ သဘောထား တိုက်ဆိုင်တာ ဆိုလို့ တစ်ယောက်စနှစ်ယောက်စပဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ သူတို့အားလုံးဟာ စေ့စေ့စပ်စပ် ရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ လူတွေချည်းပဲ။ ဟုတ်ပြီ၊ ဒီစနစ်ဟောင်းကို စွန့်ပြီး လူထုအကြိုက် လိုက်ကြစို့လို့ ပြောကြလိမ့်မယ် ထင်သလား။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ တစ်ယောက်ယောက်က ဝင်ပြိုင်ပြီး မထင်မှတ်ဘဲ နိုင်သွားတာမျိုးတွေ ရှိတတ်တယ်။ ဒါမျိုး သူတို့ လုပ်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာပြည် မိုးလေ၀သ အခြေအနေ
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/15/2015 - No comments
အင်တာနက်လိုင်းများ တစ်နိုင်ငံလုံးမကောင်းဘဲ ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် လာမည့်လပိုင်းအတွင်း မျက်နှာတစ်ဖက်ကို လှည့်ထားရင်း သမ္မတကြီးအနေနဲ့ လုထုကို ငဲ့ညှာပြီး ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် စဉ်းစားပေးပါရန် တောင်းဆိုကြမည့် အစိုးရ ၀န်ထမ်းများ လမ်းပေါ်မှာ မကြာမကြာ တွေ့မြင်လာရနိုင်ကြောင်း လေ့လာသုံးသပ်ရပါသည်။
in ဇင်ဝေသော်, သူတို့ဆီကသတင်း - on 8/15/2015 - No comments
ကြောင်တောင်မှ ကြွက်ခုတ်တဲ့ကြောင်က အသက်ရှည်သတဲ့။
ကမ္ဘာ့စံချိန်၊၂၆ နှစ်နဲ့ ၁၃ ရက်တဲ့။
ကျန်တာတွေလည်း အဲသလိုပဲ နေမှာ။
သဒ္ဓါဓိကဘုရားအလောင်း ရှိတာကို မေ့ထားလို့ လုံးဝမရဘူး
in သီဟနာဒ, ကျောင်းတွင်းမှတ်စု - on 8/14/2015 - No comments
ဒီနေ့ တရုတ်ပြက္ခဒိန်အရ New Moon ပေါ့။ အရင် ဒု ဝါဆိုလပြည့်နေ့က ဓမ္မစက္ကပဝတ္တနသုတ် ရွတ်ပြီး အလှည့်ကျ ဒီညမှာ သစ္စဝိဘင်္ဂသုတ်ကို ရွတ်ကြတယ်။
အဓိပ္ပါယ်ကို ကျကျနန သူတို့ နားမလည်ကြပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ရွတ်နေကြပုံက သိပ်ပြီးအားရပါးရရှိတယ်။ သဒ္ဓါဓိကဘုရားအလောင်း ရှိတာကို မေ့ထားလို့ လုံးဝမရဘူး။
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/14/2015 - No comments
ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ၊ ခေါင်းပေါင်းစကြီးတွေကိုယ်စီနဲ့ ဒကာကြီးနှစ်ယောက် ဓာတ်ပုံက သတင်းစာမှာ ပြူးလို့။
ရန်ဖြစ်တန်း ကစားနေကြတာ ဟုတ်ပုံမရဘူး။ တကယ်ဆော်နေကြတာ။
တစ်စုံတစ်ရာ အမှားအယွင်းမရှိရင် ဦးသိန်းစိန်က နေရာဆက်ထိန်းပေးဖို့ အစီအစဉ်ရှိကြဟန် တူပါတယ်။
တရုတ်နဲ့ကွဲသွားတာဆိုလို့ ဒီမိုကရေစီသို့ ဝန်ခံတာ၊ ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးမယ် ကမ္ဘာသိကြေငြာတာပဲ ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည် ရွေးကောက်ပွဲကလည်း နယူးယောက်မာရသွန် လုပ်အားပေး တစ်ယောက် ပြောသလိုပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။
"ဘာလို့များ ငွေကုန်၊ အချိန်ကုန်ခံနေကြလဲ မသိဘူး၊ ကင်ညာက လူတစ်ယောက်ခေါ်ပြီး လည်ပင်းမှာ ဆုတံဆိပ် ဆွဲပေးလိုက်ရင် ပြီးတာပဲ၊ အခု မလိုအပ်ဘဲ အားလုံး အလုပ် ရှုပ်နေကြရတယ်" တဲ့။
(August 13 at 11:09pm)
ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ လုပ်ပေးတယ် တဲ့
in Politics, ဇင်ဝေသော် - on 8/13/2015 - No comments
စလုံးအစိုးရက စလုံးနည်းစလုံးဟန်ပဲ။ ပတ်ပတ်လည်မှာ သစ်ပင်ဟောင်းတွေနှုတ်၊ အားလုံးအသစ်တွေနဲ့ အစားထိုးနေလို့ မေးကြည့်တော့ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလို့ တဲ့။
လီကွမ်းယုပြောသားပဲ၊ တို့က အစောကြီးကြိုလုပ်ပေးရင် လူထုက မေ့သွားတာ။ မလုပ်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲနီးမှ လုပ်ပေးတယ် တဲ့။
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးကို လွယ်လွယ်တော့ အတည်မပြုသင့်ဘူး
နေပြည်တော်မှာ တိမ်အနည်းငယ်ပဲရှိပြီး ရာသီဥတု သာယာတယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲလား။
လီလီနိုင်ကျော်က ရာသီဥတုကောင်းပါသည် ဆိုတဲ့သီချင်းကို တကယ်ပဲ ဆိုခဲ့သလား။
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးကို လွယ်လွယ်တော့ အတည်မပြုသင့်ဘူး။
(August 13 at 10:24am)
နေပျီဒေါ်မှာ အဲ့လို ဖြစ်နာ
ကမ်းလက် shared Even Demata's video.
August 13 at 4:08pm ·
Ito ang totoong kung-fu
Posted by Even Demata on Friday, April 24, 2015
in ဇင်ဝေသော်, မောနင်း ပို့စ် - on 8/13/2015 - No comments
၁၊ ၂။ အစိုးရက ပြည်သူနဲ့ယှဉ်တော့ နာမည်ပိုပျက်မယ့်ကိန်းပဲ။ ရေဘေး သင့် ပြည်သူအများစုက စေတနာရှင်ပြည်သူလူထုရှိတယ် အစိုးရကို အားမကိုး တဲ့။
ရက်ရောတဲ့ နိုင်ငံတွေစာရင်းမှာ အမေရိကန်နဲ့အတူ ထိပ်ကရှိနေပေမဲ့ လူထုရဲ့ တစ်ရက်ဝင်ငွေ (အနည်းဆုံး) သုံးဒေါ်လာပဲရှိတဲ့ နိုင်ငံမွဲရဲ့ စေတနာက အမှတ် ပိုရတာပေါ့။
၃။ ဦးသိန်းစိန်က ပါလီမန် မဝင်၊ ဒါပေမဲ့ အဖွဲ့ချုပ်က ဒေါ်စု သမ္မတမဖြစ်နိုင်မှု၊ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲပြိုင်ပွဲဝင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ရာမှာ အငြင်းပွားစရာတွေ ရှိနေမှုနဲ့ နာမည်ကြီး အစိတ်သားကိစ္စကြောင့် ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဒုတိယ သက်တမ်း ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ ပြောမရကြောင်း အဆုံးသတ်ထားလေရဲ့။
in ဇင်ဝေသော်, ပေါ့ပေါ့ပါးပါး - on 8/12/2015 - No comments
ကြက်တူရွေးဆိုင်မှာ ဈေးသုံးမျိုးတင်ထားတဲ့ ကြက်တူရွေး သုံးကောင်ရှိတယ် တဲ့။
"ဒီဖက်က ကြက်တူရွေးက ဘာသာစကား နှစ်မျိုးပြောနိုင်တယ်၊ သူက ဒေါ်လာ တစ်ထောင်၊ ဟိုဖက်က ကြက်တူရွေးက ဘာသာစကား သုံးမျိုးအထိ ပြောနိုင် တယ်၊ သူက နှစ်ထောင်၊ အလယ်ခေါင်က ကြက်တူရွေးကတော့ ဒေါ်လာ သုံးထောင်ပါ။ သူက ဘာစကားမှတော့ မပြောဘူး"
"ဘာစကားမှ မပြောတတ်ဘဲနဲ့ သူက ဘာလို့ ဈေးကြီးနေတာလဲ"
"ဒါတော့ ကျနော်လည်း ကောင်းကောင်းမသိဘူး၊ ဟို နှစ်ကောင်က သူ့ကို အဘ ခေါ်လို့တော့ ဖြစ်နိုင်တာပဲ"
(၁၉၉၁၊ ဧပြီ၊ ရီးဒါးဒိုင်ဂျက်ကို မှီးပါတယ်)
in ကာတွန်း - on 8/12/2015 - No comments
ကမ်းလက် shared BrainWave ဉာဏ်လှိုင်း's photo.
ဒါလေးများ သတင်းထူး လုပ်နေရသေး
၁။ ဒါလေးများ သတင်းထူး လုပ်နေရသေး။ ၂။ ကမှ သတင်း။
ဘဲငန်းကလေးတွေက မျက်စေ့အလင်းပွင့်ရာသစပြီး ဘဲငန်းမကြီးနောက်ကို တဂက်ဂက် မည်သံပေးရင်း မကွေမကွာ လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါကို ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုက မိခင်မေတ္တာ...
ရယ်စရာ ဥပဒေ (လက်ထပ်စာချုပ်မရှိရင် ရှစ်ပါးသီလစောင့်...
သက္ကရာဇ် ၂၀၄၀ မှာ ရေပြတ်လပ်မှု အကြီးအကျယ် ရင်ဆိုင်ရဖ...
လူက ဘာသာရေးနဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ယူ၊ ဘုန်းကြီးက နိုင်ငံေ...
စထရိတ်တိုင်းမ်း အယ်ဒီတာ့အာဘော်က ဆရာကြီးနှစ်ယောက် ရ...
စင်္ကာပူမှာ မဲပေးဖို့ ဖောင်ဖြည့်သူ တကယ်ပဲ ရှစ်ထောင်ထ...
လူငယ်တွေဆီမှာ အဓိက မြန်မာ့ ကိုယ့်ကျင့်တရား တန်ဖိုး...
ရွှေကူမေနှင်းထံသို.အိတ်ဖွင့်ပေးစာ (အလင်းရောင် ဆိုသူ...
ဦးသန်းရွှေ အသက်ရှင်နေသေးရင် တရုတ်သမိုင်းကို လေ့လာပါ...
သဒ္ဓါဓိကဘုရားအလောင်း ရှိတာကို မေ့ထားလို့ လုံးဝမရဘူး...
ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမျိုးကို လွယ်လွယ်တော့ အတည်မြ...